Jose Mourinho oo diyaar u ah inuu qabto shaqada kooxda Arsenal haddii la cayriyo macallin Unai Emery – Gool FM
Jose Mourinho oo diyaar u ah inuu qabto shaqada kooxda Arsenal haddii la cayriyo macallin Unai Emery
(London) 30 Okt 2019. Macallin Jose Mourinho ayaa albaabada u furay inuu bedelo Unai Emery haddii kooxda Arsenal ay cayriso tababarahan reer Spain, sidaas waxaa warinaysa shabakadda ESPN FC.
Shabakadda ESPN FC ayaa sheegaysa in macallin Jose Mourinho uu xiiseynayo shaqada tababarennimo ee kooxda Arsenal haddii ay noqoto mid bannaan, taasoo ka dhigaysa in Gunners ay fursad u haysato inay qaadato macallinka reer Portugal.
Tababare Unai Emery ayaa dhexda kaga jira cadaadis sii kordhaya oo ku aaddan shaqadiisa garoonka Emirates kaddib markii uu xilli ciyaareed isku dhafan ku furtay kal ciyaareedkan.
Ma jiraan qorshe deg deg ah oo shaqada looga eryi doono hoggaamiyaha reer Spain, kaasoo kooxdiisa Gunners kala qeyb galaya caawa kulanka ay ka horjeedaan Liverpool wareega afaraad ee Carabao Cup, laakiin Mourinho ayaa u furan inuu la hadlo kooxda haddii boosku bannaan yahay.
Ilo wareedyo ayaa u sheegay ESPN FC in Jose Mourinho uu haysto fursadda uu koobab kula guuleysan karo saddex kooxood oo kala duwan oo ka dhisan horyaalka Premier League haddii uu ku biiro Gunners, maadaama uu saddex koob oo horyaalka ah horay ula qaaday Chelsea, laakiin waxa uu u baahnaan doonaa ballanqaad ka yimaada guddiga fulinta iyo in lacag uu heli karo si ay ugu ogolaadaan inuu la soo saxiixdo xiddigaha uu rabo si uu u galo tartan adag oo la xiriira dhanka koobabka.
Jose ayaa ku sugnaa garoonka Emirates waxaana uu daawanayey kulankii ay Arsenal guusha 3-2 ah ka gaartay kooxda Portuguese-ka ee Vitoria Guimaraes tartanka Europa League, markaasoo uu Nicolas Pepe oo ah ciyaaryahan uu kula taliyay inuu yimaado Man United intii uu joogay Old Trafford uu dhaliyay labo goo loo laadadka xorta ah.
RASMI: Van Dijk, De Ligt & De Jong oo hoggaaminaya liiska xulka qaranka Netherlands ee kulamada isreeb-reebka koobka Euro 2020
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Liverpool Iyo Arsenal ee tartanka Carabao Cup oo la shaaciyey